प्रधानमन्त्रीको प्रश्न : मैले अर्का अध्यक्षलाई हट्न भन्यो भने के हुन्छ ? | हिमालयन ट्रिबुन
HT २०७७ मंसिर ४, बिहीबार ०६:२५
त्यसमा गम्भीर आरोपसमेत भएको हुनाले मैले बैठक बोलाउने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । ती आरोप अनुत्तरित हुन पनि सक्दैनथे । मैले त्यसको जवाफ किन दिनुप-यो ? वास्तवमा ती आरोप सही थिएनन्, अनुपयुक्त, अनुचित, झुठा र भ्रमपूर्ण थिए, तिनका बारेमा मैले स्पष्ट पार्नु नै जरुरी थियो । त्यसकारण मैले व्यक्तिगत तवरमा नै अगुवाइ उहाँको भएको हुनाले अर्का अध्यक्षलाई पत्र लेखेँ । त्यस पत्रको जानकारी बोधार्थका रूपमा पत्र बुझाउन आउने साथीहरूलाई त दिएँ नै, अरू साथीलाई पनि जानकारीका लागि दिएँ । त्यसको प्रत्युत्तरमा अर्को सात पेजको जवाफ अर्का अध्यक्षले लेख्नुभयो । त्यसको जवाफ मैले दिएको छैन । स्वाभाविक रूपमा त्यसको पनि उचित जवाफ दिनुपर्ने छ ।
माधव कमरेड मात्रै नडराउने होइनन्, अरू पनि कोही डराउलान् जस्तो लाग्दैन । कोही पनि डराउँदैनन् । यस्तै राजनीति गरेर आएका मान्छे कोही डराउलान् जस्तो लाग्दैन । सबै शूरैशूरा हुँदा शूरै चाहिँ बुद्धिमत्तापूर्ण कति हुन्छ र कति हुँदैन ? फेरि पनि विचार गर्न मेरो आग्रह छ । अहिले अब बैठकमा जुन विषयमा छलफल हुनुपर्छ पहिले र निष्कर्ष निस्किनुपर्छ त्यसो नगरिकन अगाडि जान सकिँदैन । यही विषयमा छलफल गर्न म तयारीमा पुगिसकेको छैन, मेरो जवाफ पत्र पनि तयार भइसकेको छैन । मैले त्यो पत्र मसिनोगरी हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यत्ति हो कि मैले परिस्थिति अत्यन्त गम्भीर देखेको छु । मैले पहिलेदेखि भन्ने गरेको छु, यो धम्क्याएको होइन । यस्तो हैरानी, यति हुर्मत, यति अपमान, यति घटिया लाञ्छना जीवनमा मैले पहिलोपल्ट यति गरिमामय ठाउँमा वितरण भएको भोग्दै छु ।
(प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी सचिवालयको मंसिर ३ गते बालुवाटारमा सम्पन्न बैठकको अध्यक्षता गर्दै गर्नुभएको सम्बोधनको सम्पादित अंश गोरखापत्रबाट साभार)
Spread the loveकाठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा थप ६७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । कास्की, बागलुङ, लमजुङ, नवलपरासी, गोरखामा गरी थप ६७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
२०७८ असार २९, मंगलवार ११:३९
सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट सबैले पाठ सिक्नुपर्छः भीम रावल
२०७८ श्रावण १, शुक्रबार २०:२८
अदालतको फैसलाले दलीय संरचना समाप्त पार्छः ओली
२०७७ चैत्र ७, शनिबार २२:३२
केपी ओलीसँग आत्मसमर्पण गर्ने छैनः वामदेव गौतम